သင့်မှာ ချစ်သူ (၂)ယောက်နဲ့အထက် ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပါ - Thadin
[ April 24, 2019 ] သင်တို့သတိမထားမိသေးသော တစ်ရာသီကို မြန်မာငွေ သိန်းရာချီရတဲ့ ကြာမြစ်…! KNOWLEDGE
[ April 24, 2019 ] သင့် ပိုက်ဆံအိတ် (သို့မဟုတ်) ငွေသေတ္တာ ထဲမှာမထားသင့်တဲ့ အရာတွေကတော့ ( လာဘ်ပိတ်စေတဲ့ စွမ်းအင်တွေ ) KNOWLEDGE
[ April 24, 2019 ] Facebookမှာစာတစ်ကြောင်းနဲ့ ထောင် ၃ နှစ်ကျနိုင်သော ၆၆( ဃ )Facebook သုံးသူတိုင်းသိထားသင့်လို့ ရှဲပေးကြပါ…! KNOWLEDGE
[ April 24, 2019 ] အချစ်ဦး နဲ့ အချစ်ဆုံးတို့ ၏ ကွာခြားချက် RELATIONSHIP
[ April 24, 2019 ] ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်ဆိုသော အလွန်အကျိုးပေးသည့် ဘုရားရှိခိုး…! KNOWLEDGE
HomeRELATIONSHIPသင့်မှာ ချစ်သူ (၂)ယောက်နဲ့အထက် ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပါ
July 17, 2018 Admin Kwee RELATIONSHIP 0
သင်ဟာ ချစ်မှုရေးရာမှာ သိပ်ကျွမ်းနေတဲ့ဆရာကြီးလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဆရာမကြီးလား…။ သင့်ရဲ့လက်ရှိအချစ်ရေးအခြေအနေက တစ်ယောက်မကတဲ့ ချစ်သူတွေရှိနေပြီး များပြားလှတဲ့အချစ်တွေကြားမှာ တိုင်ပတ်နေပြီလား။ ဒီလိုအခြေအနေတွေက စစချင်းမှာတော့ ပျော်စရာဖြစ်ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ခေါင်းကိုက်လာတတ်တာပါ။
ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေကို ဘယ်လို အဆင်ပြေပြေ ထိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်ရင် အောက်မှာပါတဲ့အချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။ အကုန်လုံးမဟုတ်တောင် တစ်ချက်နှစ်ချက်ကတော့ သင့်အတွက် အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ ချစ်သူ နှစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီနှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့နာမည်ကို တစ်ခုတည်းထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဥပမာ – ပထမ ရည်းစားတစ်ယောက်ရပြီး အဲဒီတစ်ယောက်ကို “မေ” လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်ရလာတဲ့ ရည်းစားကိုလည်း “မေ” လို့ခေါ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ မဟုတ်ရင် နာမည်မှားခေါ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
(၂)။ Contact List က နာမည်တွေကို ဂရုစိုက်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်း Contact List မှာ နာမည်တွေကို ဂရုစိုက်ပြီး မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်။ တချို့ကောင်မလေးတွေက Call Log ကိုကြည့်ပြီး ပြဿနာရှာတတ်တာမို့ ကိုယ်က တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆီကို ဖုန်းခေါ်ထားတာတွေ့ရင် သတိထားမိသွားမှာဖြစ်ပြီး ပြဿနာ တက်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနာမည်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးထဲက တစ်ယောက်ယောက်နာမည်တွေကို အစားထိုးပြီး မှတ်ထားတာပါပဲ။
ဥပမာ – “မေ” က ကိုယ့်ဆီ ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ “မေ” လို့မပေါ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနာမည်ပေါ်လာတော့ အလုပ်ကိစ္စလုိ့အကြောင်းပြလို့ရမှာဖြစ်ပြီး ခပ်ဝေးဝေးမှာ ဖုန်းသွားပြောလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါက ကိုယ့်အတွက်လည်း လုံခြုံတယ်လေ။
ကိုယ်က ဒီတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ သွားတော့မယ်ဆိုိရင် အခြားတစ်ယောက် ဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဆိုတာ သေချာ Comfirm လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ကိုယ်သွားတဲ့နေရာက တခြားတစ်ယောက်ရှိတဲ့နေရာဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံသွားနိုင်ပြီး ကိုယ်လည်း တိုင်အကြီးကြီးပတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လည်းစိတ်အေးအေးနဲ့သွားနိုင်အောင်၊ လုံခြုံအောင်လို့ နေရာတွေကို အရင်ဆုံး Comfirm လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
(၄)။ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲပါ
သင့်ရဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်က (A) ဖြစ်ပြီး တခြားတစ်ယောက်က (B) လို့ပဲဆိုပါစို့။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ (A) ဆီကို ပုံမှန်ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်တစ်ခုထားရမှာဖြစ်ပြီး (B) အတွက်လည်း ပုံမှန်ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်တစ်ခု ထားရမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ သင့်အနေနဲ့ သင်ဆက်ချင်တဲ့အချိန်တွေ ဆက်နေမယ်ဆိုရင် သူတို့ကလည်း သင့်ဆီကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေအတိုင်းမဟုတ်ပဲ ဖုန်းတွေခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
(A) ဆီနဲ့ ဖုန်းပြောနေတုန်း (B) ဆီကဖုန်းလာတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် (B) နဲ့ ဖုန်းပြောနေတုန်း (A) ဆီကနေ ဖုန်းလာတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့ သင်ဘယ်သူနဲ့ဖုန်းပြောနေသလဲဆိုိတာ သူတို့ သိချင်လာမှာဖြစ်ပြီး သင့်အကြောင်းကို စုံစမ်းတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ကြိုးစားနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
သငျဟာ ခဈြမှုရေးရာမှာ သိပျကြှမျးနတေဲ့ဆရာကွီးလား၊ ဒါမှမဟုတျ ဆရာမကွီးလား…။ သငျ့ရဲ့လကျရှိအခဈြရေးအခွအေနကေ တဈယောကျမကတဲ့ ခဈြသူတှရှေိနပွေီး မြားပွားလှတဲ့အခဈြတှကွေားမှာ တိုငျပတျနပွေီလား။ ဒီလိုအခွအေနတှေကေ စစခငျြးမှာတော့ ပြျောစရာဖွဈပမေယျ့ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ခေါငျးကိုကျလာတတျတာပါ။
ဒီတော့ ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူတှကေို ဘယျလို အဆငျပွပွေေ ထိနျးထားနိုငျမလဲဆိုတာ သိခငျြရငျ အောကျမှာပါတဲ့အခကျြလေးတှကေို ဖတျကွညျ့လိုကျနျော။ အကုနျလုံးမဟုတျတောငျ တဈခကျြနှဈခကျြကတော့ သငျ့အတှကျ အသုံးဝငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
ကိုယျ့မှာ ခဈြသူ နှဈယောကျရှိနတေယျဆိုရငျ အဲဒီနှဈယောကျစလုံးအတှကျ ခဈြစနိုးချေါတဲ့နာမညျကို တဈခုတညျးထားတာ အကောငျးဆုံးပါ။ ဥပမာ – ပထမ ရညျးစားတဈယောကျရပွီး အဲဒီတဈယောကျကို “မေ” လို့ချေါတယျဆိုရငျ နောကျထပျရလာတဲ့ ရညျးစားကိုလညျး “မေ” လို့ချေါတာ အကောငျးဆုံးပါ။ မဟုတျရငျ နာမညျမှားချေါတာမြိုးဖွဈနိုငျပွီး ဖွရှေငျးလို့မရတဲ့ပွဿနာမြိုးတှဖွေဈသှားနိုငျပါတယျ။
(၂)။ Contact List က နာမညျတှကေို ဂရုစိုကျပါ
ကိုယျ့ရဲ့ ဖုနျး Contact List မှာ နာမညျတှကေို ဂရုစိုကျပွီး မှတျသားထားဖို့လိုပါတယျ။ တခြို့ကောငျမလေးတှကေ Call Log ကိုကွညျ့ပွီး ပွဿနာရှာတတျတာမို့ ကိုယျက တခွားမိနျးကလေးတဈယောကျဆီကို ဖုနျးချေါထားတာတှရေ့ငျ သတိထားမိသှားမှာဖွဈပွီး ပွဿနာ တကျနိုငျပါတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီးနာမညျ၊ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့ရဲ့ဆှမြေိုးထဲက တဈယောကျယောကျနာမညျတှကေို အစားထိုးပွီး မှတျထားတာပါပဲ။
ဥပမာ – “မေ” က ကိုယျ့ဆီ ဖုနျးဆကျတယျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ဖုနျးမှာ “မေ” လို့မပျေါပဲ ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီးနာမညျပျေါလာတော့ အလုပျကိစ်စလုိ့အကွောငျးပွလို့ရမှာဖွဈပွီး ခပျဝေးဝေးမှာ ဖုနျးသှားပွောလို့ရနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အဲဒါက ကိုယျ့အတှကျလညျး လုံခွုံတယျလေ။
ကိုယျက ဒီတဈယောကျနဲ့တှဖေို့ သှားတော့မယျဆိုရငျ အခွားတဈယောကျ ဘယျနရောမှာရှိသလဲဆိုတာ သခြော Comfirm လုပျဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျပဲ ကိုယျသှားတဲ့နရောက တခွားတဈယောကျရှိတဲ့နရောဆိုရငျ သူတို့နှဈယောကျဆုံသှားနိုငျပွီး ကိုယျလညျး တိုငျအကွီးကွီးပတျပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီတော့ ကိုယျလညျးစိတျအေးအေးနဲ့သှားနိုငျအောငျ၊ လုံခွုံအောငျလို့ နရောတှကေို အရငျဆုံး Comfirm လုပျဖို့လိုပါတယျ။
(၄)။ အခြိနျကို စီမံခနျ့ခှဲပါ
သငျ့ရဲ့ခဈြသူတဈယောကျက (A) ဖွဈပွီး တခွားတဈယောကျက (B) လို့ပဲဆိုပါစို့။ ဒီလိုဆိုရငျ သငျ့အနနေဲ့ (A) ဆီကို ပုံမှနျဖုနျးဆကျတဲ့အခြိနျတဈခုထားရမှာဖွဈပွီး (B) အတှကျလညျး ပုံမှနျဖုနျးဆကျတဲ့အခြိနျတဈခု ထားရမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတျပဲ သငျ့အနနေဲ့ သငျဆကျခငျြတဲ့အခြိနျတှေ ဆကျနမေယျဆိုရငျ သူတို့ကလညျး သငျ့ဆီကို သတျမှတျထားတဲ့အခြိနျတှအေတိုငျးမဟုတျပဲ ဖုနျးတှခေျေါပါလိမျ့မယျ။
(A) ဆီနဲ့ ဖုနျးပွောနတေုနျး (B) ဆီကဖုနျးလာတာ ဖွဈကောငျးဖွဈလိမျ့မယျ။ ဒါမှမဟုတျ (B) နဲ့ ဖုနျးပွောနတေုနျး (A) ဆီကနေ ဖုနျးလာတာ ဖွဈကောငျးဖွဈလိမျ့မယျ။ ဒီလိုနဲ့ သငျဘယျသူနဲ့ဖုနျးပွောနသေလဲဆိုတာ သူတို့ သိခငျြလာမှာဖွဈပွီး သငျ့အကွောငျးကို စုံစမျးတာမြိုးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ အခြိနျကို စီမံခနျ့ခှဲဖို့ ကွိုးစားနိုငျတာ အကောငျးဆုံးပါ။
သီဟတင်စိုးကို အမှုဖွင့်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးကို အလုပ်ခန့်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေဆန်း
အမှန်တရားအတွက် အုတ်တချပ် သဲတစ်ပွင့် ဒေါ်ညိုကို သုဝဏ္ဏစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်း
This Year : 181039
Total Users : 540063
Total views : 2443368